पथरीमा चर्कियो १० लाख काण्ड, एकअर्कामाथि हिलो छयापाछयाप - Purbeli News
प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत्र २५, २०७६ समय: १८:०३:५८
मोरङ । विश्वभर कोरोना भाईरसको त्रास फैलिईरहेका बेला मोरङको पथरीशनिश्चरे नगरपालिकामा भने १० लाख काण्ड चर्चामा आएको छ । यहि बिषयलाई लिएर एक पक्षले अर्को पक्षलाई हिलो छयाप्ने काम समेत शुरु भएको छ ।
प्रक्रिया मिचेर नगरपालिकाले नगरका स्वास्थ्य संयोजकका नाममा १० लाख रुपैयाको चेक काटेपछि बिवाद शुरु भएको हो । ब्यत्तिको नाममा यति ठुलो रकम चेक काटन नपाईने नियम छ । अधिकांश जनप्रतिनिधिहरु उनलाई चेक काटने बारेमा छलफल नभएको र आफुलाई थाहा नभएको बताउँछन ।
आचार्य भने यसबिचमा “नगरले ६० लाख बराबरको खाद्यान आपुर्ति गरेको छ । त्यसको टेन्डर, प्रकृया विधी के छ के त्यस्को चै टेन्डर, प्रकृया विधी चाहिन्न ? कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार काम गर्दा म माथि शंका भए तिनै जनप्रतिनिधीले गर्दा भैगोनी” उनी आक्रोश पोख्छन । आफु कर्मचारी भएकाले नगरले दिएको काम गर्ने हो । उनले भने । यसबिचमा पथरीशनिश्चरे नगरपालिकाका कर्मचारीहरुले कर्मचारीको मनोवल गिराउदै कर्मचारीको चरित्र हत्या गरेको भन्दै प्रेस विज्ञप्ती निकालेका छन । संचार माध्यममा “पथरीशनिश्चरे नगरपालिकाको १० लाख व्यक्तिको नाममा चेक आउट” भन्ने समचारको खण्डन गर्दै नगरले प्रेस विज्ञप्ती निकालेको हो ।
समचारका विषयमा पथरीशनिश्चरे नगरपालिकाका नगर प्रमुख दिलिप कुमार राई “सामाजिक संजालमा जे समचार आयो त्यो झुटो भएको बताउँछन । १० गतेको कार्यपालिका बैठकमा निर्णय भएअनुसार सबै कार्य भएको हो जहाँ कोटेसनको कुरा छ आपत विपतको समयमा त्यो संभव हुँदैन उनी भन्छन ।
के भएको थियो निर्णय ?
सरकारले चैत ११ गते देखि देशव्यापी लकडाउन गरेका अवस्थामा टेन्डर र प्रकृयामा जाँदा जोखिम बढ्ने भएकाले नगरपालिकामा आवश्यक व्यवस्थापन गर्न लाग्ने खर्च तत्काल नगर प्रमुखको निर्देशन तथा तोक आदेशबाट निकासा र भुक्तानी गर्ने र उक्त खर्च आगामी कार्यपालिका बैठकबाट अनुमोदन गर्ने निर्णय भएको थियो ।
नगर प्रबक्ता याम गुरगाइका अनुसार चैत्र १० गतेको नगर कार्यपालिका बैठकबाट कोरोना भाईरसको प्रकोपबाट सावधानी अपनाउन पेश्की स्वरुप १० लाख निकाल्ने निर्णय भएको हो । सोहि अनुरुप स्वास्थ्यकर्मीहरुका लागि आवश्यक पर्ने व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (एएभ्), आइसोलेशन वार्ड सञ्चालनको लागि बेड व्यवस्थापन गर्ने, नगरभित्र रोगको संक्रमण हुन नदिन डिसइन्फेक्सन गर्न औषधि तथा सेनिटाइजर खरिद लगायतका कार्य गर्न नगर प्रमुखको तोक आदेश बमोजिम रु. १० लाख पेश्की स्वरुप दिइने निर्णय भएको थियो ।
पथरी नगर अस्पताल, शनिश्चरे स्वास्थ्य चौकी हसन्दह स्वास्थ्य चौकी लगायत थप तीन वटा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र, एम्बुलेन्स सेवा र सरसफाई कर्मचारीहरुको व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री एएभ् तथा सम्भावित रोगीहरुलाई उपचारको व्यवस्था मिलाउन आइसोलेशन वार्ड स्थापना गर्ने कार्य शुरु भएको उक्त कार्य गर्दा लाग्ने खर्चका लागि १० लाख निकासा भएको र खर्च आगामी कार्यपालिका बैठकबाट अनुमोदन गर्ने निर्णय भएको थियो ।
सोहि कामको जिम्मा पाएका नगरका स्वास्थ्य शाखाका जिम्मेवार कर्मचारी ज.स्वा.नि. मुरारी आचार्य र कर्मचारी माथि सामाजिक सञ्जाल तथा मिडियामा आएपछि सो निर्णय बिवादमा परेको हो ।
के भन्छन जनप्रतिनिधि ?
संकटको समयमा पहिलो प्राथमिकता जनताको सुरक्षा हो नगरले यो संकटमा विधी र प्रकृयामा जाँदा ठुलो क्षति हुने हुन्छ त्यसैले तत्काल कार्यपालिकाको बैठकले खर्चको विवरण आगामी कार्यपालिका बैठकबाट अनुमोदन गर्ने निर्णय अनुसार अगाडी बढेको वडा नं. १ का वडाध्यक्ष बाबुराम एङदेनले बताए ।
आपतकालिन अवस्थामा कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय अनुसार हामी र जनताको समस्या हल गर्न लागेका छौ । देश लकडाउन छ टेन्डर र प्रकृयामा जादा लामोसमय लाग्ने र नगर जोखिममा रहने भएकाले कार्यपालिका सदस्यको सहमतीमै भएको वडा नम्बर ६ का वडाध्य जयबहादुर तामाङको भनाई छ ।
कार्यपालिका सदस्यको सहमतीमै भएको कुरा हो । सबै जनप्रतिनिहरुले निर्णयमा सहि गर्नु भएको छ । सोहि अनुरुप कार्यनयन गर्दा कर्मचारीमाथी आरोप आउछ यो समयमा प्रकृयामा जान संभव छ ? प्रमुख प्रसासकिय अधिकृत अम्बिकाप्रसाद धमलाको प्रश्न छ ।